TAAGEERADA-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
KPAL Taageero farsamo
JW Filim / filimada ilaalinta rinjiga gaarka ah. Waxaan uqiraneynaa aaminaadda inaan kaliya guuleysan doonno sida macaamiisheennu u yihiin. Qeyb muhiim ah oo ka mid ah sida aan u taageerno dadaallada macaamiisheennu waa adeegyadeena sare ee taageerada.
Iyada oo shaqaalaheena taageerada farsamada ay diyaar u yihiin inay ku caawiyaan isniinta ilaa jimcaha 8:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo, arimaha sidoo kale si fudud ayaa lagu xalin karaa iyadoo loo marayo taageeradayada internetka. Halkan, waxaad ka heli doontaa tilmaamaha rakibaadda oo dhammaystiran, jawaabaha su'aalaha inta badan la isweydiiyo, talooyinka rakibidda, iyo sidoo kale sawirro rakib ah oo isku xigxiga iyo fiidiyowyo fiidiyoow ah Haddii aadan wali awoodin inaad xalliso arrinta farsamada ka dib markaad booqato goobta, waxaad dooran kartaa inaad la xiriirto waaxdayada taageerada farsamada taleefanka bilaashka ah ee ah 0086-574-89257752, ama codsi noogu soo dir foomka taageeradayada.
JW Filim / filimada ilaalinta rinjiga gaarka ah. Inaad ka madax banaanaato cilladaha soo saaraha muddo shan sano ah laga bilaabo taariikhda iibsiga. Cilladaha la daboolay waxaa ka mid ah: hurdi, midabeyn, dildilaac, barar iyo xoqid.
Si aad u gudbiso dalab, marka hore isku day inaad la xiriirto rakibayaasha idman ee KPAL ee rakibidda sameeyay. Haddii ay dhacdo inaad awoodi weydo inaad la xiriirto rakibayaasha rasmiga ah ee loo yaqaan 'kpal installer', sabab kasta ha noqotee, fadlan la xiriir KPAL. Waa inaad haysataa kaarka dammaanadda, nuqul ka mid ah risiidhkaaga asalka ah ee tilmaamaya aagagga caymiska oo aad u dirto KPAL sida lagu codsaday in lagu socod siiyo sheegashadaada. Sheegashooyin sax ah, KPAL waxay lahaan doontaa rakibe KPAL rakibay oo meesha ka saara oo dib u codsada filimka ilaalinta KPAL meelaha la go'aamiyay in lagu daboolayo damaanadda oo ay ku jiraan qaybo iyo foosha.
Dammaanadda iyo daawooyinka kor lagu sharaxay waa damaanad qaas ah oo la heli karo. Rakibayaasha KPAL ee la fasaxay ma lahan wax oggolaansho ah inay wax ka beddelaan ama ku kordhiyaan damaanadda nooc kasta oo ay yihiin. KPAL ayaa kaligeed mas'uul ka noqon doonta go'aaminta ansaxnimada dhammaan sheegashooyinka waxayna xaq u leedahay inay diido sheegashooyinka aan buuxin shuruudaha sida kor lagu sharaxay. beddelka filimka cilladaysan, oo ay ku jiraan qaybo iyo foosha, ayaa ah daaweynta keliya; mas'uuliyaddu kuma sii fideyso waxyeellooyin kale, oo shil ah, ama mid kale. Bixinta khidmadaha shaqada ee kujira damaanadkan waxaa si toos ah loogu sameyn doonaa rakibayaasha loo yaqaan 'kpal rakibayaasha' waxaana lagu xisaabin doonaa iyadoo la adeegsanayo gunnada caymiska ee ay daabacday KPAL.